रुस-युक्रेन युद्धको २८औँ चीनले चाल्यो यस्तो कदम — Sanchar Kendra
रुस-युक्रेन युद्धको २८औँ चीनले चाल्यो यस्तो कदम
काठमाडौं । रुस-युक्रेन यु’द्धको २८ दिन भएको छ । यसको प्रभाव विश्वभर परेको छ । यो घटनाले विश्वमा नयाँ ध्रुविकरणका संकेत देखिएका छन् । रुसी राष्ट्रपति र भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिबीच पनि भेट र अमेरिकी राष्ट्रपतिको यूरोप भ्रमणले पनि यो संकेत सतहमा आएको हो ।
रुस-युक्रेनबारे अहिलेसम्म तटस्थ रहेको चीन पनि बिस्तारै खुल्ने संकेत देखिएको छ । उसले ताइवान र अमेरिकाले आफ्ना केही अधिकारीलाई लगाएको प्रतिबन्धको विषय उठाएर ध्रुविकृत हुने देखिएको छ ।
चिनियाँ समाचार संस्था सिनह्वाका अनुसार चीनले अमेरिकाले आफ्ना केही अधिकारीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता नलिए त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । चीनले प्रतिबन्ध तत्काल खारेज नगरिए अमेरिकी अधिकारीमाथि पनि प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
चीनले आफ्ना अधिकारीमाथि लगाएको प्रतिबन्धबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताएको छ । अमेरिकाले पूर्वाग्रह राखेर चिनियाँ अधिकारीमाथि अनावश्यक दबाव दिने गरेको समेत चीनको भनाई छ ।चीनले उइगुर मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि दमन गरेको आरोपमा अमेरिकाले केही चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रवेशमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाईएका चिनियाँ अधिकारीको संख्या र परिचय भने खुलाइएको छैन ।
एक दर्जन अधिकारीमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हुन सक्ने बताइएको छ । अमेरिकले चीनको सिञ्चीयान प्रान्तमा उइगुर मुस्लिमलाई बन्दी बनाईएको दाबी गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र यो दुईपक्षीय सम्बन्धका लागि गलत नजीर हुने चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन बिनले बताए । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी कदमको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने पनि वाङले बताएका छन् ।
युक्रेनको युद्ध : रुसका लागि मारियुपोल यति महत्वपूर्ण किन ?
रुससँग युक्रेनको युद्धमा मारियुपोलमा सबैभन्दा धेरै बमबारी भएको छ र यसै कारण यो शहर सर्वाधिक क्षतीग्रस्त भएको छ । लगातार रुसी हमला भोग्नुपरिररहेको मारियुपोल युक्रेनमा मस्कोको सैन्य अभियानको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । तर किन ? यो शहरमा कब्जा गर्नु रुसका लागि रणनीतिक जीत साबित हुनेछ र यस्तो भएकाो खण्डमा युक्रेनलाई एउटा ठूलै झट्का लाग्नेछ । यस्तो किन त ? यसका चार मुख्य कारण छन् ।
रुसले मारियुपोललाई तोपखाना, रकेट र मिसाइलले भरिदिएको छ । ९० प्रतिशत शहर बर्बाद भइसकेको छ । यतिमात्रै होइन यहाँ बिजुली, ताजा पानी, खाना र स्वास्थ्य सम्बन्धि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ठप्प पारिएको छ जसलाई मानवीय संकटकाल मानिएको छ । रुसले अब यसका लागि युक्रेनमाथि आरोप लगाएका छ । रुसका अनुसार युक्रेनले सोमबार बिहान ५ बजेसम्मको समयसीमामा आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
युक्रेनले आफ्नो अन्तिम सैनिकसम्म यो शहरको रक्षा गर्ने संकल्प लिइरहेको छ । रुसी बल क्रमशः केन्द्रतर्फ अघि बढिरहेको छ र शान्ति सम्झौता नभएको स्थितिमा रुसले अब मारियुपोलमा बमबारी बढाउने आशंका व्यक्त गरिएको छ । रुसले यदि मारियुपोलमा पूरा नियन्त्रण पाउँछ भने पनि यहाँबाट उसका करिब ६ हजार सैनिक युक्रेनका अन्य हिस्सामा जान सक्नेछन् । हाल यी सैनिकलाई एक–एक हजार सैनिकको रणनीतिक समूहमा बाँडिएको छ ।
२. युक्रेनको अर्थव्यवस्था चौपट गर्नका लागि
मारियुपोल लामो समयदेखि अजोव सागरमा रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण बन्दरगाह रहेको छ । अजोव सागर, ब्ल्याक सीसँग जोडिएको छ । अजोव सागर क्षेत्रमा यो सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो र यहाँ व्यापक स्तरमा फलाम र स्टिलसँग सम्बन्धित काम हुन्छ । सामान्य अवस्थामा युक्रेनबाट स्टिल, कोइला र मकै मारियुपोलबाटै मध्य पूर्व र अन्य स्थानका लागि निर्यात गरिन्थ्यो ।
आठ वर्षदेखि अर्थात्, सन् २०१४ मा जबदेखि मस्कोले क्राइमियामाथि अवैध कब्जा गरेको छ, यो शहर रुसी सैन्य बल र स्वघोषित मुक्त क्षेत्र दोनेत्स्क–लुहान्स्कमा रहेका क्रेमलिन समर्थकबीच शहर पिल्सिएको छ । मारियुपोलको नियन्त्रण गुमाउनु युक्रेनको अर्थव्यवस्थाका लागि एउटा ठूलो धक्का साबित हुनेछ ।
३. रुसले पाउनेछ प्रोपोगान्डाको मौका
मारियुपोलमा युक्रेनी लडाकूको इकाई पनि छ जसलाई अजोव ब्रिगेड भन्ने गरिन्छ । यसको नाम अजोव सागरमा राखिएको छ जुन मारियुपोललाई ब्ल्याक सीसँग जोडिन्छ । अजोव बिग्रेडमा नव–नाजीसहित धुर दक्षिणपन्थी चरमपन्थी समावेश छ । यद्यपि, युक्रेनी सेनाको अगाडि यो निकै कम संख्यामा हो तर मस्कोका लागि यी सैनिक प्रोपोगान्डाको हतियारजस्तै छ । यदि रुसले राम्रै संख्यामा अजोव ब्रिगेडका लडाकूलाई जिउँदै पक्राउ गर्न सफल हुन्छन् भने उसले युक्रेन र उसको सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि रुसको सरकारी मिडियामा चलिरहेको सूचनाको युद्धको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ।
४. मनोबलमा हुनेछ ठूलो असरः
यदि रुस मारियुपोला कब्जा गर्छ भने यो युद्धमा समावेश दुबै पक्षको मनोबलमा ठूलो असर छोड्नेछ ।मारियुपोलमा रुसको जीतपछि क्रेमलिन आफ्नो जनतालाई सरकारी मिडियामार्फत् रुस आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउन सक्नेछ ।
राष्ट्रपति पुटिन (जसका लागि यो युद्ध व्यक्तिगत प्रतित हुन्छ) का लागि यो सबैको ऐतिहासिक महत्व छ । उनले युक्रेनको ब्ल्याक सी तटरेखालाई नोवोरशिया (नयाँ रुस) को हिस्सा मान्छन् । रुसी साम्रज्यले १८ औँ शताब्दिमा अटोमन साम्राज्यसँग लगातार भएको थुप्रै युद्धमा दक्षिणमा ओडेसादेखि पूर्वमा लुहान्स्क भएको युक्रेनी क्षेत्रलाई हासिल गरेको थियो र यसलाई नोवोरशिया अर्थात् नयाँ रुस भनियो ।
सोभियत संघका बेला नोवारेशियाको धेरैजसो हिस्सा युक्रेनियन सोभियत सोशलिस्ट रिपब्लिकको हिस्सा हुने गर्दथ्यो जुन पछि गएर आधुनिक समयको युक्रेन बन्यो ।मस्कोको यो कदम रुसीहरुलाई पश्चिम समर्थक किभ सरकारको अत्याचारबाट बचाउनका लागि हो भन्ने भावनालाई पुटिनले जनतामा फेरि जगाउन चाहन्छन् । हालै मारियुपोल पुटिन र उनको लक्ष्यबीच खडा छ ।
तर युक्रेनीका लागि मारियुपोल उनीहरुको हातबाट उम्किनु निकै ठूलो झट्का हुनेछ । यसको सैन्य र अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको असर त हुनेछ नै यसले ती महिला र पुरुषको हौसला पनि टुट्नेछ जो लामो समयदेखि यसको रक्षाका लागि जमिनमा संघर्षरत छन् । खेरसोनपछि मारियुपोल पहिलो ठूलो युक्रेनी शहर हुनेछ जसमाथि रुसको कब्जा हुनेछ ।यहाँ मनोबलको अर्को पक्ष पनि छ, युक्रेनले यहाँ कति हदसम्म रुसको सामना गर्नसक्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ ।
मारियुपोलले रुसको प्रतिरोध पक्कै पनि गरेको छ तर त्यसको मूल्य पनि हेर्नुपर्नेछ । यो शहर लगभग बर्बाद भइसकेको छ । इतिहासमा यो ग्रोजनी र अलेप्पोको सूचीमा समावेश हुन् जहाँ रुसको बमबारीले भग्नावशेषबाहेक केही पनि छोडेको छैन । यो युक्रेनका अन्य शहरका लागि सन्देश पनि हो – तपाईंले मारियुपोलजस्तै लडाईं छान्नु हुन्छ भने तपाईंको भविष्य पनि यस्तै हुनेछ । जनरल सर रिचर्डस् बेरन्स भन्छन्, ‘रुस मारियुपोलमा घुस्न सक्दैन, उसले त्यहाँ आफ्नो ट्याङ्क उतार्न सक्दैन, त्यसैले उसले यसलाई भग्नावशेषको थुप्रो बनाइरहेको छ । र हामीले ती स्थानको हातल पनि यस्तै देख्न सक्छौँ जुन रुसका लागि महत्वपूर्ण छ । बीबीसी